Waayahay! Ka sii fiican u diyaarso duulimaadka Lufthansa ee Yurub ilaa Mareykanka hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Aviation » Waayahay! Ka sii fiican u diyaarso duulimaadka Lufthansa ee Yurub ilaa Mareykanka hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dalxiiska • Wararka Mareykanka
Qiyaastii toddobaad ka dib dhammaadkii qorshaysnaa ee xayiraadaha safarka Mareykanka, Lufthansa Group airlines waxay la kulmeen koror dheeraad ah duulimaadyada Mareykanka.
Maalmo cayiman usbuucii la soo dhaafay, duullimaadyada ka gudba badweynta Atlantikada ayaa saddex jibaarmay toddobaadkii ka horreeyay. Dalbashada toddobaadkii la soo dhaafay ee waddooyinka qaarkood ayaa ku dhowaad gaadhay xiisadda ka hor
heerarka. Duulimaadyada SWISS oo ka yimid Zurich iyo Lufthansa oo ka yimid Frankfurt kuna socday New York iyo Frankfurt iyo Zurich ilaa Miami ayaa lahaa kuwa ugu badan ee jaale ka helay safarrada firaaqada iyo ganacsiga. Dhaqaalaha Sare, Ganacsiga iyo Fasalka Koowaad tikidhada aad u badan ee Mareykanka ayaa la iibsaday marka loo eego isla muddadaa 2019.
Qiyaastii toddobaad kadib dhammaadka qorshaysan ee xayiraadaha safarka Mareykanka, Kooxda Lufthansa
shirkadaha diyaaradaha ayaa la kulmaya koror dheeraad ah oo ku aaddan duulimaadyada Mareykanka. Waa hubaal
maalmood usbuucii la soo dhaafay, duullimaadyada ka gudba Atlantic-ga ayaa saddex jibaarmay
usbuuc ka hor.
Dalbashada toddobaadkii la soo dhaafay ee waddooyinka qaarkood ayaa ku dhowaad gaadhay xiisadda ka hor
heerarka. Duulimaadyada SWISS oo ka socda Zurich iyo Lufthansa oo ka socda Frankfurt kuna socda New York
iyo Frankfurt iyo Zurich ilaa Miami waxay haysteen jaaleyaashii ugu badnaa labada firaaqo
iyo socotada ganacsiga.
Dhaqaalaha Sare, Ganacsiga iyo Fasalka Koowaad tikidhada aad u badan ee Mareykanka ayaa la iibsaday marka loo eego isla muddadaa 2019.
Kooxda Lufthansa waxay la kulmeysaa kor u kaca dalabkaan iyadoo la bilaabayo dheeri
duulimaadyada USA ogeysiis gaaban. Lufthansa iyo SWISS, tusaale ahaan, waxay bixin doonaan wadar ahaan saddex duulimaad oo maalinle ah oo ku taga Miami ogeysiis gaaban laga bilaabo
Waxaa jira dalab aad u xoog badan oo ah duullimaadyada Mareykanka bisha Diseembar ee soo socota. Cusub
ballansashada usbuucii la soo dhaafay ee bishan waxay ahayd mid aad u sarreysa sidii ay ahayd 2019kii
isla waqtigaas. Duulimaadyada New York - dhaqan ahaan aad baa loogu baahan yahay inta lagu jiro
Xilliga Kirismaska ​​- mar hore ayaa lagu xoojiyay xiriirro dheeri ah.
Duulimaadyada Kooxda Lufthansa waxay siinayaan 55 xiriir toddobaadle ah
New York oo ka yimid xarumahooda kala duwan ee Yurub ee Austria, Belgium, Jarmalka iyo
Switzerland bishii December. Ballaarinta muddada gaaban ee adeegyada hadda waa hadda
Keliya New York iyo Chicago, Lufthansa Group airlines waxay bixiyaan xiriiro maalinle ah oo ka yimaada Yurub bisha Nofembar marka loo eego duulimaadyada dhammaan Aasiya-Pacific.
Kooxda Lufthansa waxay filaysaa in furitaanka Mareykanka ay tallaalaan socotada EU
waxay calaamad u noqon doontaa waddamada iyo gobollada kale si ay u fududeeyaan socdaalka hawada caalamiga ah mar kale oo ay dib u rogaan xannibaadaha safarka.
Duulimaadyo dheeraad ah sidoo kale gudaha Jarmalka
Kooxda Lufthansa waxay sidoo kale kordhineysaa duulimaadyada gudaha ee Jarmalka ee xarumaheeda Yurub
iyadoo dalabka duullimaadyada Mareykanka uu sii kordhayo. Tusaale ahaan, marka la barbar dhigo Luulyo,
Lufthansa waxay kordhineysaa duullimaadyadeeda gudaha Jarmalka boqolkiiba 45 laga bilaabo bilowga
Oktoobar. Tan micnaheedu waxaa weeye, waxyaabo kale oo ah in bisha Oktoobar ay jiri doonaan sagaal halkii ay ka ahaan lahaayeen lix duulimaad oo maalinle ah oo ka yimaada Frankfurt kuna socda Berlin. Duulimaadyada Frankfurt ilaa Hamburg ayaa kordhin doona lix ilaa siddeed duulimaad maalin kasta. Xaaladdu waxay la mid tahay Munich:
Shanta xiriir ee maalinlaha ah ee Berlin ayaa la kordhin doonaa ilaa toddoba laga bilaabo
Oktoobar; halkii ay lix duulimaad maalinle ah ka imaan lahaayeen Munich kuna aadi jireen Hamburg, waxaa jiri doona ilaa
11 duullimaad oo maalinle ah mustaqbalka. Sidoo kale laga bilaabo bisha Oktoobar, Lufthansa waxay mar kale duulimaad saacado ah ka bilaabi doontaa Hamburg iyo Berlin ilaa xarumaheeda Frankfurt iyo Munich subaxdii iyo fiidkii.
Iyada oo ballaarinta jadwalka duulimaadka, xiriiro badan ayaa la heli karaa inta lagu jiro
maalin. Taas macnaheedu waa socotada ganacsiga oo inta badan doonaya inay subaxdii ama duhurkii duulaan
fiidkii ayaa ka faa'iideysan doona jadwalka duulimaadka oo la hagaajiyay sida safrayaasha kale.